Orinasa manana teknolojia avo lenta mandray anjara amin'ny fanasarahana sy fanamasinana ireo otrikaina voajanahary
Sichuan Uniwell biotechnology co., Ltd dia orinasa teknolojia avo lenta izay manampahaizana manokana amin'ny fisarahana sy fanadiovana ny otrikaina avy amin'ny loharanon-karena voajanahary. Ny orinasa dia manana foibe ao Qionglai City, sy toby famokarana roa izay hita ao amin'ny distrikan'i Dongming, faritanin'i Shandong sy tanànan'ny Qionglai, faritanin'i Sichuan.
Ny toha-pamokarana dia misitraka ireo tombony azo avy amin'ny faritra eo an-toerana
Ny toha-pamokarana dia misitraka ireo tombony azo avy amin'ny faritra eo an-toerana. manana andiam-pamokarana fanoherana ankehitriny marobe mitohy miaraka amin'ny haitao 6000 taonina isan-taona.
Ny orinasanay dia manana atrikasa madio madio izay misy fitaovana fitiliana mandroso. Manana rafitra fanaraha-maso kalitao feno ihany koa izahay izay nandalo fanamarinana rafitra kalitao ISO9001.
Ny vokatray dia amboarina mifanaraka amin'ny fenitra GMP mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra amin'ny dingana rehetra. Ny vokatra azonay dia nahazo KOSHER, HALAL, SC, FDA, Non-GMO ary fanamarinana manampahefana iraisam-pirenena hafa.
Hihaona amin'ny ekipanay matihanina
Ny orinasanay dia mifantoka mafy amin'ny fananganana ny ekipa teknika. Miara-miasa foana amin'ny manam-pahaizana maro avy any Shina sy firenena hafa izahay. Namolavola doka famokarana maherin'ny folo karazana vokatra izahay, izay anisany ny fitrandrahana soja, nalaina Polygonum cuspidatum, nalaina dite maitso, nalaina Phellodendron, ary nalaina Ginkgo biloba, ohatra, ny vokatra isan-taona nalaina avy tamin'ny Polygonum cuspidatum dia mahatratra 100mt, ary ny ny vokatra isan-taona an'ny fitrandrahana soja dia mahatratra 50mt.
Manome isan-karazany izahay ho an'ny fahasalamana tsara
Ny orinasanay dia nanolo-tena hitrandraka loharanon-karena ary hiezaka hamorona endrika orinasa tsara. Manantena izahay fa hanome vokatra azo avy amin'ny zavamaniry madio sy avo lenta amin'ny tsena manerantany ary koa manantena ny hitondra ny anjara birikiny amin'ny fahasalaman'ny zanak'olombelona.
Ho an'ny fanontanina momba ny vokatra na pricelist anay dia mba apetraho aminay ny mailakao ary hifandray ao anatin'ny 12 ora izahay.